N'ụwa dijitalụ nke oge a, anyị anụla banyere uru ịmalite weebụsaịtị, ịmepụta ọnụnọ n'ịntanetị na ịmegharị ndị ọbịa saịtị ka ọ bụrụ ndị ahịa na-akwụ ụgwọ.
Amalite webụsaịtị bụ ihe na-atọ ụtọ mana ọ bụ mmalite nke ịkwalite azụmahịa n'ịntanetị. Ijide n'aka na enwere ike ịchọta ya na ngwa nchọta ma nweta ya na nsonaazụ Google bụ ebe ọrụ siri ike na-amalite.
Nke a bụ akụkọ ngwa ngwa maka gị. Ọ bụ ihe banyere onye ọchụnta ego na-etinye ọnwa na mgbalị n'ime weebụsaịtị ọhụrụ na-egbu maramara iji kwalite ọrụ na ngwaahịa ya. N'agbanyeghị mbọ kachasị mma na mbọ iji bulie okporo ụzọ, webụsaịtị ahụ dị na ala nke ndị ọrụ inyocha ọchụchọ na itinye ego ahụ agbanweghị ka mmụba nke ahịa.
Familiar mara gị nke ọma? Obi dị m ụtọ na ọ bụghị otú ahụ. Site na iji SEO na nchịkọta weebụ, a nwere ike ịgbanwe weebụsaịtị ka ọ wee see ihe ndị dị elu na ọchụchọ n'ịntanetị.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ihe na ndụ, itinye obere ọkachamara n'ọrụ nwere ike ịga ọtụtụ ụzọ ma a bịa na SEO. Chee echiche banyere ọdịiche dị n'etiti ịrụ ọrụ na mmega ahụ naanị gị na onye na-azụ ọzụzụ. Ihe a rụpụtara na-akacha mma mgbe niile, ọsọsọ ma na-adịgide karịa mgbe gị na onye na-azụ ọzụzụ na-arụkọ ọrụ. Enwere ike itinye otu uzo a maka ịmepụta ọnụnọ nke ọma n'ịntanetị site na ịbanye na nkwado nke SEO na ndị ọkachamara iji nyere aka azụmaahịa gị iji bulie azụmaahịa ọchụchọ.
Otu ndi otu ndi oru wuru Semalt wuru ma na enyere ndi ahia aka n’uwa niile iwulite profaịlụ di na ntaneti ha kariri iri. Ka anyị leba anya na ndị ha bụ na ihe ha na-eme.
Na nkenke, Semalt bụ Onye Nchịkwa Digital dijitalụ zuru oke na ebumnuche iji mee ka ụlọ ọrụ ntanetị nwee ihe ịga nke ọma. Site n'isi ụlọ ọrụ na Kyiv, Ukraine, Semalt na-azụ ahịa na ndị ahịa n'ụwa niile site na ịnye nkwalite SEO, mmepe weebụ yana ọrụ nyocha dị elu, yana ịmepụta ọdịnaya nkọwa na-akọwa.
Semalt bụ otu ihe karịrị 100 IT okike na ndị ahịa azụmaahịa - gbakwunyere na anụ eburu nnụnụ Turbo - ebe gbanyere mkpọrọgwụ ya na teknụzụ dijitalụ. Site na ịrụkọ ọrụ ọnụ na ịkekọrịta ọtụtụ afọ nke otu ọkachamara, ndị otu Semalt emepụtara usoro SEO mbụ iji nyere ndị ahịa aka ị nweta oke ọfụma maka ọnọdụ dị n'ịntanetị - nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ Google.
Dị ka onye ọ bụla nke na-eji ịntanetị ga-ama, ịpụta na elu ntụpọ nke nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ bụ ọla edo n'ịntanetị. Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka visibilụ dị elu ma bulie okporo ụzọ weebụ, mana maka azụmaahịa dị n'ịntanetị, ọ nwekwara ike ịkpata ịdọta ndị ahịa nwere ike na mmụba nke ahịa.
Yabụ kedu ka esi arụ ọrụ? N'ụzọ bụ isi, enwere nhọrọ abụọ: AutoSEO na FullSEO. Mana buru ụzọ, maka nke gị nke na-edozighi banyere nzube SEO, nke a bụ ntakịrị nkuzi.
SEO kwụ ọtọ maka Nchọpụta Ihe Nchọpụta. Nke ahụ pụtara na igwe nchọta ọchụchọ dịka Google nwere ike ịchọta edemede gị, blog, ma ọ bụ weebụsaịtị n'etiti ụwa nke ọdịnaya ntanetị wee tinye ya n'ime nsonaazụ ọchụchọ ha. Ihe omuma dikariri n’ime ya bu ihe ndi n’ile nyocha nke ihe nlere, mgbe ahu ihe di elu n’ileputa ya aputa.
Ọ dị ka igwe na - achọ ọchụchọ na - agbanwe algọridim ha oge niile, nke pụtara ihe nwere ike ịrụ ọrụ n'afọ gara aga, agaghị adịkwa irè n'afọ a. Enwere ọtụtụ ederede dị na ntanetị nwere ndụmọdụ banyere otu esi bulie SEO, mana otu ngwaọrụ kachasị dị mma bụ site na iji isiokwu dị mkpa na ntanetị niile. Mgbe ahụ, ịchọrọ iche banyere mkpado meta, na-ebuli isi okwu na ihe oyiyi, jikọta ụlọ na ịmepụta ọdịnaya pụrụ iche.
Ihe ndị a dị n’elu na-ewe oge na nhazi, na maka ọtụtụ ndị nwere ọzụ ahịa, oge dị oke ọnụ ahịa (ma ọ bụ oge ụfọdụ obere ahịa). Nke ahụ bụ ebe ọrụ dị ka AutoSEO na FullSEO nwere ike inye aka.
AutoSEO bụ ngwaọrụ emebere maka obere azụmaahịa ndị chọrọ ịbawanye okporo ụzọ saịtị mana nwere ike ọ gaghị ama ama SEO na achọghị ịme nnukwu ego ruo mgbe ha hụrụ ezigbo nsonaazụ.
Ọrụ ahụ na-amalite site na mkpesa dị mkpirikpi banyere ọnọdụ weebụsaịtị ugbu a, nyocha ya nke ọma site na ọkachamara SEO iji chọpụta mmejọ ma chọpụta mmezi ọ ga-eme. Otu Injinia SEO họrọzie isiokwu na-eme ka okporo ụzọ na-ebute okporo ụzọ dị mkpa maka weebụsaịtị na azụmahịa ọ na-akwalite. Na-esote, teknụzụ Semalt na-amalite iwu njikọ nke ihe ntanetị metụtara akụ, yana saịtị ndị ahọpụtara dabere na afọ ngalaba yana Google Trust Rank.
Ozugbo ngwaọrụ ndị ahụ dị, Semalt na-enye ndị ahịa mmelite kwa ụbọchị maka otu esi eleba anya na igodo akara, yana ịkọ akụkọ mgbe niile iji nyochaa ịdị mma nke mkpọsa ahụ.
FullSEO na- enye usoro SEO agbakọtara ọnụ maka azụmaahịa buru ibu, ndị nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ maka ndị dị njikere itinye obere ego iji bulie weebụsaịtị na iji SEO.
Ọrụ FullSEO na-agbaso ụkpụrụ yiri nke ahụ na AutoSEO, mana azịza ndị a na-atụ aro sitere na nyocha miri emi, gụnyere nyocha nke ndị asọmpi, ma na-ekwe nkwa mmụba okporo ụzọ weebụsaịtị na ntughari dị elu. Ọ bụ ntanetị bụ ọrụ iji zite mkpokọta mkpokọta nsonaazụ ọchụchọ Google - ngwa ngwa.
Site na iji FullSEO, ndị otu Semalt na-ahụ na ebe nrụọrụ weebụ na-agbaso ụkpụrụ SEO kpamkpam. A na-eme nke a site na njikarịcha saịtị n'ime ma dozie njehie, dịka ịmepụta meta mkpado maka isiokwu, melite koodu HTML mkpokọta, wepụ njikọ ndị mebiri emebi na ịkwalite ntanetị. Uru ndị ọzọ na ngwugwu FullSEO gụnyere enyemaka zuru ezu site na Semalt maka mmepe weebụsaịtị yana ịmepụta ọdịnaya-enyi na enyi SEO. Nsonaazụ bụ nloghachi dị mma na itinye ego na nsonaazụ ogologo oge.
Dika ichegodila ugbua, isi ihe na - akpata Semalt SEO oru bu ojiji nke ihe nyocha iji mepụta uzo puru iche nye ndi ahia gi. Agbanyeghị, okwu ahụ bụ "nchịkọta ihe ntanetị" nwere ike iwepụta ọgba aghara, yabụ ka anyị nyochaa ihe ọ pụtara yana otu esi eji usoro ahụ na Semalt.
Kedu ihe nyocha weebụsaịtị?
Nchịkọta weebụsaịtị bụ ngwaọrụ eji eme ihe iji nyochaa arụmọrụ dị n'ịntanetị, yana soro ọnọdụ ahịa gị na ndị asọmpi.
Nyochaa mgbe niile dị mkpa iji ghọta oke ahịa ahịa zuru ezu. Ọ bụghị naanị na ọ na-enyere aka igosipụta isiokwu dị mkpa maka SEO ma lekwasị anya na arụmọrụ nke ndị asọmpi, mana ọ nwekwara ike ịchọpụta ohere ọhụrụ maka mmepe ika na mpaghara, ma ọ bụ ụzọ ọhụrụ maka nkesa ngwaahịa.
Ihe ngwugwu Semalt na-enye ohere ịnweta data nyocha niile achọrọ maka nsuso uto nke weebụsaịtị na ịchọpụta ihe mgbochi ọ bụla. Ọ gụnyere mmelite ọkwa ọfụma, akụkọ na-acha ọcha maka ịkọwa nsonaazụ yana data data ndenye site na Semalt's API. Ọ dịkwa ọnụ ala mana ọ na - emepụta nghọta bara uru iji nyere aka kọwapụta atụmatụ SEO. Ojiji nke nyocha weebụsaịtị bụ akụkụ dị mkpa nke ihe egwuregwu SEO na, site na enyemaka ndị ọkachamara, enwere ike iji ya gbanwee saịtị ka ọ bụrụ ngwá ọrụ azụmahịa dị irè.
Ndị ahịa Semalt obi ụtọ
Semalt arụ ọrụ na ihe karịrị 5,000 weebụsaịtị na ndị ahịa na-edepụta gafee ụwa na ụlọ ọrụ azụmahịa sitere na ahụike na ịdị mma ruo na teknụzụ na akụrụngwa. Ọtụtụ ndị ahịa nwere obi ụtọ akọwo nsonaazụ dị mma na Semalt na-enweta nyocha dị elu na Google na Facebook.
Otu n'ime ndị ahịa dị otú ahụ nwere obi ụtọ bụ ụlọ ahịa na-ere ahịa UK na-ahụ maka ngwa ahịa mmanụ a rawụ na mmanụ a honeyụ. Ebumnuche ahụ bụ iji mee ka ụlọ ọrụ ahụ banye n'ọkwá dị elu na 10 na Google ma mee ka okporo ụzọ nje na-aga na weebụsaịtị. N'ime ọnwa isii iji ọrụ FullSEO, okporo ụzọ mụbara site na 4,810 pasent, nleta weebụsaịtị kwa ọnwa mụbara site na 12,411 na ọnụọgụ isi okwu na Google TOP-100 gbagoro site na 147 ruo 10,549. E gosipụtara onye ahịa ya na igbe '' Ajụjụ Ndị Na-ajụ '' nke Google, na-emekwu ka ọ dịkwuo elu n'okporo ụzọ nje na saịtị ahụ.
Kedu ka Semalt si mee ya? A rụpụtara nsonaazụ ndị a site na iji nyocha nyocha omimi dị omimi iji chọpụta ebe ndị ọ dị mkpa ka edozi. Etu usoro nyocha a si bụrụ usoro iji nwetaghachi weebụsaịtị, dị ka iwepube PageSpeed, iweghachi weebụsaịtị na okike ọdịnaya SEO. Mgbe nke ahụ gasịrị, Semalt malitere ịkwalite weebụsaịtị ahụ dị ka akụkụ nke ngwugwu FullSEO site na mkpọsa ụlọ njikọ njikọ dị elu. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Maka ọmụmụ ihe ndị ọzọ gbasara ndị ahịa Semalt nwere obi ụtọ, gaa na ebe nrụọrụ weebụ ebe a.
Isoro Semalt rụọ ọrụ
Ugbu a na akọwaala SEO na nchịkọta weebụsaịtị, gịnị dị ka iso Semalt rụọ ọrụ?
Nke mbu, Semalt bụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ yabụ ịchọta asụsụ nkịtị abụghị nsogbu. Ndị otu a na-asụ Bekee, French, Italian na Turkish, n'etiti ndị ọzọ.
Nke abuo, ibido AutoSEO di nfe ni na ubochi 14 ka odi $ 0.99. Nke a na-esoro nhọrọ ịhọrọ atụmatụ ị ga-agba maka otu ọnwa, ọnwa atọ, ọnwa isii ma ọ bụ otu afọ. Ọ bụ ezigbo ụzọ iji duzie ọrụ tupu ima elu banye na FullSEO.
N'ikpeazụ, Semalt na-enye nkwado ndị ahịa 24/7, nke pụtara na ebe ọ bụla ịnọ n'ụwa, ị nwere ike ịkpọtụrụ onye otu otu maka enyemaka na ndụmọdụ. Pụrụ ọbụna izute otu a na ntanetị site na ịga na ibe anyị gbasara websaịtị.